China Umshini Wokuprinta Amakhukhi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Umshini Wokuprinta Amakhukhi - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Umshini Wokuprinta Amakhukhi)
ama-cookie photo printer A4
umshini wekhokheji wesithombe sokunyathelisa isithombe
Ama-Ripples asetshenziswa yinani elikhulayo lezinkampani emhlabeni jikelele ukubandakanya izethameli zabo, ukukhulisa ukuqwashisa brand kanye nokwandisa ubuqotho. Imfihlo yokuphumelela kwethu ilula: sikusiza ukuthi udale isipiliyoni esiphuzo sokuphuza esidonsela amakhasimende kuzo futhi sibagcine bebuya ngokunye....
Umshini Wokunyathelisa Umbhede Wendlala
Umshini we-Printer UV Flatbed uthola uhlelo lokulawula ikhomputha ye-multi-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe (design) zifakiwe kukhompyutha, zingaphrinta kunoma yiluphi ulwazi ngqo. Ezifana: i-portrait, landscape, i-oli, i-ink, i-calligraphy, imidwebo yemidwebo, njll....
Le mishini yokuphrinta ye-A3 Digital T-Shirt ingasetshenziswa njenge-t shirt iphrinta, iphrinta ye-UV kanye ne-printer yokudla. Le phrinta ingahlangabezana nesicelo sakho sejubane. Kuphela cishe ngonyaka wesigamu ukuthuthukisa le nguqulo entsha, sibuyekeze lo mshini ngomsebenzi ogcwele othomathikhi nohlelo lomjikelezo...
Umshini Wokuprinta Amakhukhi Umshini wokuprinta amakhukhi Umshini Wokuprinta Izembatho Umshini Wokuprinta Amakhadi Wokwezifiso Umshini wokuphrinta wezinkuni Umshini wokuprinta we-A3 T-Shirt Umshini wokuphrinta we-Cafe Umshini wephrinta yebhakhodi